ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်ခြင်း - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဆံသားနှစ်ခွဖြစ်ခြင်းဆိုတာ ဆံသားပျက်စီးခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆံသားထိပ်ဖျားတွေ နှစ်ခွဖြစ်လာတတ်သလို အမွှာမွှာ ဖွာထွက်လာတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဆံပင်အလှအပလည်း ထိခိုက် စိတ်တွေလည်းရှုပ်ရပြီပေါ့။
?ဘာကြောင့် ဆံသားပျက်စီးပြီး နှစ်ခွဖြစ်ရတာလဲ ??
နေပူဒဏ်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သလို ဆံပင်ကောက်ခြင်း ဆံပင်ပုံသွင်းခြင်းတွေမှာ အသုံးပြုရတဲ့ အပူဒဏ်တွေကြောင့်လည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဆံပင်ဆေးဆိုးခြင်း ပေါင်းတင်ခြင်းတွေကို အလွန်အကျွံလုပ်မိတဲ့အခါမှာလည်း ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့် ဆံသားကို အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ အပေါ်ယံအလွှာကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပြီး ဆံသားတွေ ဖွာထွက်လာစေတတ်ပါတယ်။
ဆံပင်တွေရှုပ်ထွေးနေချိန်မျိုးမှာ ဘီးနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖီးချတာမျိုး၊ မလိုအပ်ဘဲ ခေါင်းခဏခဏဖီးနေတာမျိုးတွေကလည်း ဆံသားပျက်စီးပြီး ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဆံပင်သပ်တင်တာကြောင့်တော့ ဆံသားနှစ်ခွ မဖြစ်စေပါဘူး။ Menkes disease နဲ့ Occipital Horn Syndrome ဆိုတဲ့ Copper ဓာတ်ပြဿနာဖြစ်တဲ့ ရောဂါမျိုးတွေမှာလည်း ဆံသားနှစ်ခွဖြစ်ခြင်းကို ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုအနေနဲ့ တွေ့ရတတ်ပေမဲ့ အတော်လေးဖြစ်ခဲပါတယ်။
?ဆံသားနှစ်ခွ ဖြစ်လာရင် ??
ဖွာထွက်နေတဲ့ ဆံသားထိပ်ဖျားလေးတွေကို ပြန်တိပြီး ညှပ်ပေးတာကလွဲရင် ကုသဖို့ နည်းလမ်းဆိုတာကတော့ မရှိသလောက်ပဲမို့ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
– ဆံပင်ကို ညင်ညင်သာသာကိုင်တွယ် ဖီးသင်ပါ
– အပူပေးရတဲ့ ဆံပင်ပုံသွင်းတာ ကောက်တာတွေရှောင်ပါ
– ခေါင်းလျှော်ရည်ကို တတ်နိုင်သမျှ ဓာတုပစ္စည်းပါဝင်မှုနည်းတဲ့ သဘာဝထုတ်ကုန်တွေ သုံးပါ
– ဆံပင်အခြောက်ခံစက်အပူကို တိုက်ရိုက်ကြာကြာမထိပါစေနဲ့
– ဖောလစ်အက်ဆစ်နဲ့ ဘိုင်အိုတင်ပါတဲ့ အားဆေးတွေ သောက်ပါ။